मेरो जागरण मेरो जीवन भाग-१७ (भाईको मलामी) - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ५ बैशाख २०७६, बिहीबार १३:४०
जीवनमा आइपर्ने कतिपय घटना हरू यति कठोर हुन्छ्न् कि जसै सामना नगरी धरै पाइन्न । अन्ततः भगवानको लीला वा खटन यस्तै रहेछ भनेर
चित्त बुझाउनु बाहेक अरु कुनै विकल्प नै हुन्न । मानिस जति सुकै सम्पन्न
होस् , बल बुद्धिले संसार जितोस् तर काल वा प्रकृतिलाई कहिल्यै जित्न सक्दैन । सक्ने पनि छैन । जस्तो चर्को घाममा शितल चस्मा लगाएर वा छाता ओढेर केही शितलताको अनुभूति गरे तापनि घाम न त मधुरा भएका हुन्छ्न् न शितल नै भएको हुन्छ । घाम वा गर्मी बाट पर्ने प्रभाव उत्तिकै परिरहेकै हुन्छ । त्यसैले पनि “हुने हार दैव नटार” भनिएको होला ।
हाम्रो हजुर बुबा कति सन्तानमा बँचेको एक्लो हुनुहुन्थ्यो त्यो सम्म पनि हामीले थाहा पाउन सकेनौं । त्यसैले पनि होला हजुर बुबाले सन्तान वृद्धि
कै लागि सात सात ओटी हजुर आमा ल्याउनु भएको होला। सात ओटी मध्य बाट दुई फुपू र तीन बुबा हरू रहनु भएको रहेछ । हजुर बुबाको पनि अल्पायूमा निधन भएकोले , परिवारको मियो नै ढले पछि कति अप्ठेरा हरू भोग्न पर्छ , भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । अरुले केही दिन सहानुभूति देलान् , केही सक्ने सहयोग पनि गर्लान् तर त्यो भनेको केही क्षणलाई मात्र हो ।
हजुर ! हजुर हरूलाई न अल्मल्याई म सोझै कथा वस्तु तिर लैजान चाहन्छु । बुबा हरूको तीन भाइ हरुमा , माइलो बुबाका तीन ओटा बिहे भए पनि दुई आमा हरु बाट तीन दिदी र पाँच दाजु भाइ भए पनि एक दाजु सानैमा बितेकोले मैले देखिन थाहा नै भएन भनौं अरू ती दाजु र म भन्दा एक डेड बर्ष सानो भाइ थियो तीन दाजु भगवानका कृपाले हुनुहुन्छ सबै भन्दा सानो भाइ गुमाउँदाको पीडा यहाँ राख्न चाहेको हूँ ।
हजुर हाम्रो परिवार कै कान्छो भाइ विश्वनाथ आचार्य अति तेज बुद्धि
मिलन सार अति सुन्दर । म भन्दा कान्छो भए पनि पढाईमा म भन्दा एक बर्ष सिनियर । त्यो बेला धनी गरिब सबै सरकारी स्कुल मै पढ्ने भए ता पनि माइलो बुबाको आर्थिक स्थिति मजबुत थियो । उहाँलाई महाजन भनेर पनि चिन्थे । आर्थिक स्थिति राम्रो भएकोले उहाँको परिवार बजार मै स्थापित भै सकेको थियो भने हामी गाउँ मै थियौं । मेरो बुबा पछि साहित्यमा उस्को राम्रो पकड थियो ।सानै देखि गीत, कथा , कवितामा पोख्त थियो । नेपथ्य ब्याण्डमा पनि सम्लग्न भयो शुरुवाती समयमा । उस्ले हाम्रो जस्तो दुख भोग्न पनि परेन । परिवार कै कान्छो भएकोले बढी माया अवश्य नै पायो होला । मेरो खुट्टाले चप्पल पाउँदा उस्ले मोटर साइकल चलाइ सकेको थियो । उसलाई नपुग्दो केही थिएन तर एउटै कुराको मात्रै कमी थियो ।
त्यो हो उस्को साहित्य प्रतिको झुकाव वा भावना बुझ्ने उस्को परिवारमा कोही भै दिएनन् । सबैमा धन प्रति मात्र मोह , उ ठूलो अफिसर वा ठूलो व्यापरी होस् भन्ने परिवारको दवाव , व्यापारीक मात्रै माहोल तर उ एक- दम भिन्न । त्यतिका अवरोधका बाबजुद पनि SLC दिए पछि एउटा उपन्यास लेखी छाड्यो । पछि पाउने भागमा कटाउने गरि खर्च माग्यो र
छपायो पनि उपन्यास । पहिलो कृति ” त्याग”उपन्यास छपाउँदा उ जम्मा सोह्र बर्ष मात्रै थियो । म नौ कक्षामा थिएँ त्यो बेला । किताब त देखें तर पढ्ने मेरो औकात नै भएको थिएन भन्दा हुन्छ । अहिले जस्तो भए घुँडो
मुन्टो गरेर भए पनि साथ दिन्थे मेरो साहित्यकार भाइलाई ।
हो ! कागको बथानमा बकुल्लो जस्तो थियो त्यो परिवारमा भाइ । उस्को
आवस्यकता त पूरा हुन्थे तर भावना बुझिदिने कोही भएन । अन्ततः कुन बेला कहिले देखि कुलतमा फँसेछ भाइ पत्तै भएन । चुरोट , गाँजा, रक्सी उस्का अभिन्न मित्र भए । यसै त कुरा गर्न सिपालु त्यैं माथी कुलतमा फँसे पछि झनै सिपालु भएर निस्क्यो । उस्का सँगी साथी पनि धनी मानी कै छोरा
थिए त्यसैले खर्चको गर्जो टरि रहन्थ्यो । उपाए नलागे घरमा विद्रोह गरेर भए पनि लिइ छाड्थ्यो ।
मैले भर्खर भर्खर जागिर गरेको थिएँ । मेरो अफिस र उस्को घर आम्ने
साम्ने जस्तै थियो । बेला बेलामा मलाई भेट्न आउँथ्यो २०/५०/१०० जति
हुन्छ पगाली छाड्थ्यो । मैले सके सम्म कम दिएर अम्कने कोसिस गर्थें ।
ऊ जति वचनवद्द भए पनि फिर्ता आउन्न भन्ने मलाई थाहा थियो , जति दिन्थें माया मारेर दिन्थें । उस्ले टिपेर पनि राख्यो ।मलाई पनि टिप्न भन्थ्यो
एक एक पाइ चुकाउँछु मैले अंश पाए पछि भनेर आश्वस्थ पनि पार्थ्यो ।
तर लेखन निरन्तर थियो । ओशो साहित्यमा बढी झुकाव थियो भने
धर्म दर्शनमा पनि उत्तिकै राम्रो । पद्य कविता भन्दा गद्यमा बढी उस्को रुचि देखिन्थ्यो । लाग्छ हाम्रो परिवारमा उस्को पाठक मै मात्र भएँ होला ।
नत्र भट्टीमा जति सुनायो देखायो साथी हरूलाई त्यति नै हो । उपन्यास भने बजारमा कति नै कट्यो होला र ? किताबका गड्डी दुई चार बर्ष सम्म त घर मै धमिरा लाई सकेका थिए । पछि चटपटेले लगे होलान् । ऊ लेखी रहन्थ्यो थुपारी रहन्थ्यो छुट्टीभिन्न भए पछि छपाइ छाड्छु भन्न कैल्यै चुक्दैन्थ्यो ।
एक दिन अफिस छुटेर निस्क्नै लागेको थिएँ । दमौलीमा मोटर साइकल
दुर्घटना भएर गण्डकी हस्पिटलमा ल्याइ सकेको छ भनेर अफिसमै खबर
आयो । कृष्ण दाजु (माइलो बुबाकै छोरा , विश्व भन्दा जेठो)को मो सा थियो उहाँ पुगि सक्नु भएको रहेछ । ध्रुब दाजु (माइलो बुबाकै माइलो छोरा)) र
म रानी पौवा बाट हिंडेरै हस्पिटल गयौं । हामी जाँदा अर्धचेत अवस्थाम थियो । मनपरि चिच्याइ रहेको थियो । हामी गए पछि निदाउने औषधि चढाएछ्न् कि केही बेर शान्त भयो । अनि सोध खोज गर्ने वातावरण पनि बल्ल भयो । अन्त गम्भीर चोट नलागेको तर दाहिने खुट्टाको नलीहाड भने टुक्राटुक्रा भएको जानकारी डाक्टरले दिए । उपचार शुरू भयो । भित्र फुटेका हड्डीले कोपेर असैह्य पीडा हुने रहेछ । निदाउने औषधिले पनि उस्लाई १५ मि. भन्दा काम गर्दैनथ्यो । सुनिई सकेकोले तत्काल अपरेसन पनि हुन सकेन । दुई तीन दिन रोएर चिच्याएर बितायो । हामी पनि फिटिक्कै सुत्न पाइएन । दिन त जसोतसो कट्थ्यो राती साह्रै सकस भयो । अपरेसन भए पछि भने नर्मल अवस्थामा आयो । नर्मल अवस्थामा पनि फेरि अर्को समस्या घरी चुरोटको माग घरी के घरी के हस्पिटलमा त्यो सम्भव हुने कुरै भएन । प्लास्टर गरेर घर ल्याईयो । उस्ले क्रमशः नशा पनि भुल्दै गयो ।डेड महिनामा उभिन सक्ने भयो । मान्छे नै फेरियो एकदम राम्रो । ऊ स्वस्थ हुँदै गए पछि हाम्रो आवत जावत पनि कम हुँदै गयो ।खासै काम पनि भएन ।
“जो करे भगवान भला करे” सामान्य दुर्घटनाले मान्छे नै सप्र्यो । उस्को
लागि पीडा दायक भए पनि हाम्रो लागि राम्रै भयो भनेर खुशी नै लाग्यो ।
चार पाँच महिना भए पछि ऊ हिँडडुल गर्न सक्ने भयो । परिवारमा सबै खुशी थिए पुनर्जन्म भएकोमा । त्यो खुशी दैवलाई सैह्य भएन । ऊ फेरि त्यही भूमरीमा फँसेछ । कहिल्यै नउम्किने गरि । स्वास्थ क्रमशः बिग्रदैं गयो
उपचार त चलिरहेकै थियो तर उस्ले कुन झमटमा आफ्नो डोज पूरा गरि हाल्थ्यो । उपचार प्रभावकारी भएन । भौतिक रूपमा गरेको उपचारको कुनै अर्थ थिएन भावनात्मक उपचार हुन सकेन । हुने वातावरण नै भएन ।
अन्ततः हार खायो भाइले भौतिक संसार त्याग्यो । एउटा “त्याग ” अर्को गर्‍यो भौतिक संसारको ।
आफू भन्दा सानो भाइको लास जलेर सकियो । तर त्यो भाइको सम्झनाले अहिले पनि हृदय जलिरहेकै छ । उस्का पाण्डुलिपि कतिले चट्पट सित चाटे होलान् कतिले कुल्चे होलान् । कतिले त्यही पाना च्यातेर चुरोट सल्काए होलान् । प्रिय भाइ तिमीलाई सम्झी रहेछु । सम्झी रहेछु । बर्षमा दुई पटक एक एक अञ्जुली पानी तिमीलाई दिएको छु तर तिमीले पाए नपाएको सम्म पनि थाहा पाउन सक्दिन । मेरो भाइ । बस् आजलाई यति तिम्रा नाममा दुई शब्द ।
यो पनि पढ्नुहोस – मेरो जागरण मेरो जीवन भाग-१६ ( पागल प्रेमी)